Wasiirka Kalluumeysiga oo la kulmay madaxda hay’adda FAO – Radio Muqdisho
Kulankan ayaa u jeedkiisu ahaa sidii ay u wada shaqeyn buuxda u dhexmari laheyd hay’ada iyo madaxda Wasaaradda Kalluumeysiga Soomaaliya, waxaana ka qeyb galay Wasiirka Wasaarada Kalluumeysiga iyo Kheyraadka bada Soomaaliya, Wasiir ku xigeenka, Agaasimaha guud iyo Madaxa Hay’ada FAO ee Soomaaliya Mr Richad.
Markii uu soo idlaaday kulankan waxaaa warbaahinta qaranka la hadlay Wasiirka Wasaarada Kalluumeysiga iyo Kheyraadka bada Soomaaliya Maxamad Cumar Ceymooy,oo sheegay in wax badan ay isla soo qaadeen mas’uuliyiinta hay’adda FAO, isla markaana ay ka wada hadleen sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dhinac ka dhaxeeyo.
Dhinaca kale Wasiirka ayaa ka hadlay banaan bax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo shacabka uga cabanayeen sida la sheegay qashin lagu soo daadiyay badda Soomaaliya, waxaa uuna sheegay in ay tahay wax laga banaan baxo qof kastana ay waajib ku tahay in uu sameeyo banaan bax nuucaasi oo kale ku saabsan.
Hay’adda FAO oo Qaramada Midoobay u Qaabilsan Beeraha iyo Cunada ayaa wadda kulamo gaar gaar ah ay la qaadaneyso Wasaaradaha ay shaqadoodu quseyso sida Wasaaradda Beeraha, Wasaarada Kalluumeysiga iyo Wasarada Xanaanada xoolaha.
Ahmiyadda dib u heshiisiinta oo laga hadlay